ဘန်.. ဘန့်.. ဘန်း... - Saturngod
ဘန်.. ဘန့်.. ဘန်း…
Posted on Updated January 8, 2010 by saturngod
twitter တို့ wordpress , blogspot တို့ ပိတ်တာကိုတော့ ထားလိုက်။ ဘာလို့ ကိုညီလင်းဆက်နဲ့ ထူးတေဇာ site ပါ ပိတ်လိုက်တာလဲ မသိဘူး… နောက်ပြီး http://mashable.com/ ကိုလည်း ဘန်း တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားမရဘူး.. blog ဆိုတာနဲ့ ပိတ်တာလား.. ဒါမှမဟုတ် traffic တွေများလို့ပဲပိတ်တာလား.. ပိတ်စရာ အကြောင်းလည်း မရှိပဲနဲ့ ဘန်းတယ်ဆိုတော့… ???? >.<
« Safari Support Zawgyi 2009 14 inch Transparent OLED Display »
အကုန်ကို လိုက်ပိတ်ပစ်လိုက်တာ .. blackra1n ရဲ့ website ကိုပါပိတ်လိုက်တယ် .. အဲ့တော့ jailbreak လုပ်ပြီး blackra1n ကို run တဲ့အခါ connection error တက်ပါလေရော .. cydia, rock and black snow တို့ကိုပါ ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး .. တော်တော်လေး စိတ်ဓာတ်ကျစရာပါ ..
Oop!!! bad news 🙁
try to use with saudi proxy…
Don’t sayaword…..;D
ဘာမှ မဆိုင်တာတွေ ဘန်းတာတော့ ဘာကြောင့်မှန်းကို စဉ်းစားလို့မရပါဘူး။
blackra!n ကိုဘန်းလိုက်တဲ့ပြသနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲကိုစေတန်ရေ နည်းရှိရင်ပြောပါဦး။
proxy ပြောင်းသုံးလို့ရတယ်လို့ အပြောက comment မှာ ပြောထားပါတယ်။ (try to use with saudi proxy… )
Pingback: Of Course, ISP loves me | My Burmese Blog
MMU God says:
နောက်ပြီး ကိုစေတန်ရဲ့ ဒီဆိုဒ်လေးတောင်ဘန်းမလား မသိဘူး… ကျနော့် ဟာလေးတော့ ပါသွားပြီ… blogger ပိတ်လို့ wordpress ပြောင်း… စိတ်မချလို့ blog ကိုပြောင်း… နောက်ဆုံး ဘာမှမရှိတော့ ဘူး… တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး… ငါ့ဘလော့ဂ်တွေပျက်စီး… ငါ့အိမ် ဝင်ပေါက်မရှိ တော့ဘူး…
Posterous လိုဆိုဒ်ကော.. ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင်တွေကို Banned လိုက်တာမှ တပြုံကြီး.. တကယ်… စိတ်ပျက်စရာကို အလွန်ကောင်း..
ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ရေ.. proxy နဲ့ပါ ကျော်မရရင်တော့
mac book ရှိတဲ့သူဆီပြေးပီး “ဟိုဟာကြီး”နဲ့သာ custom firmware ထုတ်ပီး restore လုပ်လိုက်တော့ (3GS တော့ မရနိုင်ဘူးထင်တယ်နော်..)
ဘန်းတဲ့အကြောင်းတော့ ပြောမနေချင်ဘူး.. speed အကောင်းစားကြီးပေးထားပီး သူတို့ကြည့်မရတဲ့ ဆိုက်တွေကိုပဲလိုက်ပိတ်တယ်ဆိုထားဦးဗျာ. အခုတော့…
သူတို့ပေးတဲ့ ဒီ င ၆ ဖုတ် နှုန်းနဲ့ဗျာ.. ဘန်းချင်ရာတွေလိုက်ဘန်းတယ်.. ခုပဲကြည့် dl speed 1KB ကနေတက်မလာဘူးဗျာ..
တကယ့်ကို “heavy ဂေါ်တယ်” ဗျာ! ဒါနဲ့ စကားမဆက်…
“အီးပုံ” ကို သတိရလိုက်တာဗျာ… ဟူး~
ဘန်းလိုက်တော့ ကြည့်မရတော့ ဘူးပေါ့နော်။
နံမည်ကြီးလို့ ပိတ်ခံရတာ ထင်တယ်နော်..။
Safari Support Zawgyi 2009